Ukuphononongwa kweSistim yaMandla eSomlomo uSomlomo 7 | Iindaba zeGajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | Umfanekiso kunye nesandi, Reviews
Namhlanje sikuzisa uhlalutyo olukhethekileyo, kwaye kwakhona ezandleni zabahlobo be-Energy Sistem. Kwikhathalogu enkulu yeemveliso ezinxulumene nesandi kunye nomculo, ngeli xesha sikhethe enye ethe yabamba umdla wethu, i USomlomo waseKhaya 7.
Ngaba ubucinga ukuba lifikile ixesha leeCD zakho? Akukho nto iqhubekayo kwinyani. Njengoko sisazi, indlela yokumamela umculo iguqukile kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngaphandle koko ngoku sikhetha umculo kuLuhlu lweeNkqubo kunye noluhlu lokusasaza. Nokuba ifomathi ebonakalayo ayinanto yakwenza nayo nokuba. Ukuhlangabezana nemfuno ekhulayo, iSistem yaMandla isinika le mveliso.
1 Isistim se-Energy Sistem Home Somlomo 7, elinye ithuba kwii-CD zakho
2 Esi siSomlomo seKhaya se-Energy Sistem 7
2.1 Icandelo eliphambili
3 USomlomo wasekhaya 7, ukuguquguquka kwawo wonke umculo wakho
5 Ubuhle neNkcitho yeNkqubo yaMandla Isithethi seKhaya 7
5.5 Uluvo lomhleli
Isistim se-Energy Sistem Home Somlomo 7, elinye ithuba kwii-CD zakho
USomlomo waseKhaya 7 izixhobo zesandi ezivela kwi-Energy Sistem, Unxibelelwano lweBluetooth lwakutshanje isizukulwana. Umdibaniso ovumela isandi esizinzileyo kunye nomgangatho odibanisa nasiphi na isixhobo. Kodwa kwakhona, kwaye ezi ziindaba, kwesi stereo singamamela iiCD zethu esizithandayo. Ngaba ucinga ukuba iiCD zakho zifikelele esiphelweni? Ayikenzeki! Thenga amandla akho eSistem Home Audio 7 ngoku kwiAmazon.
Isistim yamandla, ngokusebenzisa dUSomlomo wasekhaya 7, uhlangula ifomathi ye-CD ebonakalayo ezishelifini zethu. Ngemveliso edibanisa ngokugqibeleleyo intuthuzelo ye- dlala umculo kuso nasiphi na isixhobo. Y ongezelelweyo ngohlobo lwe CD player enika into yokudibanisa ebalulekileyo kwabo banqwenela ifomathi ebonakalayo.
Ukuba ucinga ngayo, mingaphi iminyaka uthenge isitiriyo ekhayeni lakho? Okwangoku indlela esimamela ngayo umculo ayinanto yakwenza naleyo yeshumi leminyaka idlulileyo. Kodwa ngubani ongenayo imfumba yeeCD ezilusizi ekhaya? Ngoku, Ukongeza ekubeni nakho ukonwabela umculo osasazayo kulo naliphi na iqonga. Kwaye ngamandla qhagamshela i-smartphone okanye ithebhulethi yethu ngendlela efanelekileyo. Sinako nokuzisa ezo CD ebomini esiyithengileyo emini.
Esi siSomlomo seKhaya se-Energy Sistem 7
Ngokwasemzimbeni, esi sixhobo somculo Umgama ngokwawo kwizithethi eziqhelekileyo kunye nezixhobo esinokuyifumana kuyo nayiphi na inkampani. Ngokwenene siphambi kwesixhobo esipheleleyo somculo. Ukuphefumlelwa ngala maqela omculo ayephumelele kakhulu, abhaptizwa ngomhla wabo njenge "mini mini". Ifomathi ethe yatshabalalisa amaqela amakhulu amakhulu.
USomlomo weKhaya weSistem yaMandla 7 ngu iseti yezinto ezi-3. la "embindini" okanye icandelo eliphambili apho sifumana khona ulawulo lokuchukumisa, ugwebu kunye namazibuko outlet, kwaye umdlali we-CD. Kwaye izithethi ezibini ezizimeleyo esinokubeka kunye okanye ngokwahlukeneyo. Kodwa wenakuthathelwa ingqalelo ukuba uqhagamshelo lwezithethi kunye nenxalenye ephambili ngentambo. Ke ukuhamba kwabo kulinganiselwe. Inqaku elibi?
Ngaphambili, nge uyilo oluhle kwaye ngononophelo olukhulu, sifumene iziphelo ezibini ezahlukeneyo. Yahlulwe ngokuthe tye, sibona indlela icandelo elisezantsi eligqitywe ngayo ngezinto zentsimbi. Kuyo sifumana Iqhosha lomzimba ukuvula itreyi yeDC kunye nokudlala kunye nolawulo lwemenyu. Ukongeza, kwicala layo sine Izibuko le-USB, kunye nomnye Igalelo le-analog ye-3,5 mm mini jack cable.
Ngaphezulu ukusuka ngaphambili, igqityiwe ngeplastikhi ebengezelayo emnyama sayifumana ikhusi. Ngaphantsi kwesikrini ngu itreyi yomdlali weCD. Sikwafumana ifayile ye iqhosha on / off Kwisixhobo. Kwaye i ivili kulawulo lwevolumu, esinokuyisebenzisa ukuhamba kwimenyu okanye ukuya kwizikhululo. Emva sinentambo yombane, kwaye amagalelo amabini okudibanisa izithethi.
Ukuba sijonga izithethi siyabona njani ukwakhiwa kwayo kusisiseko. Kunye umzimba weplanga kunye ne-grille emnyama eyenziwe ngezinto zelaphu kwisitayile se-retro esulungekileyo. Ukubonakala kwayo kunomtsalane ngokulula kwayo. Kwaye enkosi uyilo oluncinci kunye neklasikhi iya kulunga ngokugqibeleleyo nakweyiphi na ikona naliphi na ikhaya.
Ubungakanani bezithethi bazenza lula "ezinokuhlala" kuyo nayiphi na ishelufu okanye ishelufu. Kunye ukuphakama 220mm kunye nobubanzi 180mm, ubukhulu bazo abuyi kuba yingxaki yokuyibeka apho sifuna khona. Ewe, akufuneki silibale loo nto Isithethi ngasinye sinentambo ekufuneka siyidibanise neyunithi esembindini. Isinxibelelanisi sentambo silula kakhulu ngesiphelo "sokucofa" esinokubeka kwaye sisuse umzuzwana.
Thenga amandla akho eSistem Home Audio 7 ngoku kwiAmazon ngokuhambisa simahla
USomlomo wasekhaya 7, ukuguquguquka kwawo wonke umculo wakho
Ukuba nesixhobo sokudlala umculo, ukongeza kwii-headphone, kubalulekile kulo naliphi na ikhaya. Xa siza kuthenga isithethi sithathela ingqalelo izinto ezininzi. Uyilo, amandla, ukuzimela, kwaye ke, ixabiso. USomlomo waseKhaya 7 isuntswana lala magumbi limiselwe ngenxa yokuba ibekwe kwelinye icandelo lentengiso. Okwangoku, kule meko Esi ayisosithethi esiphathwayo.
Ngale fowuni siyifumana iseti yakudala yestereokodwa ngokudlala kakhulu. Ngobungakanani kunye noyilo abaluthandayo kwasekuqaleni. Kwaye ngaphezu kwako konke, ngexabiso elenza libe mnandi kwaye ukhetho olunzulu lokugcwalisa ikhaya lethu ngomculo esiwuthanda kakhulu.
Enye yezixhobo ezahlulahlula kwezinye izixhobo zeaudio yeyayo ulawulo kude. Indawo encinci ekude eyenza akufuneki sidibane neqela ngokwalo nangaliphi na ixesha. Ukongeza ekubeni nakho ukulawula ukudlala umculo kweBluetooth kwi-smartphone, kunye nokude sinokulawula ezinye izinto eziluncedo eziboniswayo. Apha ungasele uyithengile i-Energy Sistem Home Audio 7 kwiAmazon ngexabiso elinomdla kakhulu.
Siyakwazi ukudlala umculo, njengoko besesiphawulile ngeCD. Ukongeza, umdlali naye udlala iiCD ezirekhodiweyo Ifomathi yeMP3. Ngokusebenzisa i Izibuko le-USB esiyifumanayo ngaphambili singadlala umculo ukusuka kwimemori okanye kwimemori engaphandle. Kunye negalelo le-USB, sikwafumana ifayile ye Igalelo le-analog eyi-3,5mm apho sinokudibanisa nasiphi na isixhobo sangaphandle.
Ewe sinayo uqhagamshelo lweBluetooth, iklasi 2 ene2.4 GHz yokusebenza rhoqo kunye ne uluhlu ukuya kwiimitha ezili-10 kude. Ukuhambelana kwayo nazo zonke iiprofayili kunika uqhagamshelo ngesandi esizinzileyo ngaphandle kokusika okanye ukuphazamiseka.
Gqamisa ukuba Isistim sezaMandla uSomlomo weKhaya 7 ngu ifakwe irediyo ye-FM. Into eyongezelelweyo iphantse yalityalwa ngabaninzi babavelisi. Kwaye oko, ngakumbi kwisixhobo esisigxina esifana nale, siyayixabisa kakhulu. Ibe Uluhlu lwamaxesha e-FM: 87,5 ~ 108MHz. Si ukuya kuthi ga kwi-50 yokukhangela ngokuzenzekelayo. Kwaye sinokwenza ngokusesikweni uphando lwethu.
Umzekelo USomlomo waseKhaya 7
Potencia IiWatts ezingama-30- 2 x 15W 4 ”Izithethi eziHlangayo ezipheleleyo-
Umdlali CD CD-R CD-RW MP3 ehambelanayo
Bluetooth Iklasi 2 enamaxesha ahamba nge-2.4 GHz
Fi kelela ukuya kuthi ga kwi-10 yeemitha
Igalelo le-Analog I-3.5mm jack
I-Radio yomsakazo EWE ngoseto lwe-50
Ukulawulwa kude SI
Ubukhulu besithethi X x 180 220 120 mm
Imilinganiselo yeyunithi esembindini X x 154 127 253 mm
Ixabiso 99.90 euro
Ikhonkco lokuthenga Amandla eSistem yasekhaya iAudio 7
Ubuhle neNkcitho yeNkqubo yaMandla Isithethi seKhaya 7
Uyilo ngononophelo ngenkangeleko entle kwaye elula elingana nakweliphi na ikhaya.
Ukungafani kokukhetha ukumamela umculo ngeendlela ezahlukeneyo.
Ukuba unomathotholo we-FM yindawo eyongezelelweyo ekufuneka uyiqwalasele.
Ukulawula kude kude ukulawula zonke iindlela onokukhetha kuzo.
Uyilo olunengqiqo kunye nenhle
Zonke iifomathi kwisixhobo esinye
Ulawulo ngemiba ngemiba yezemfundo
Ayisiyo isixhobo esiphathwayo.
Izithethi zixhunyiwe kwi-headunit ngentambo, ethintela ukuhamba kwabo.
Ifuna iplagi kwaye ayinabhetri.
Intambo yokudibanisa izithethi
Awunayo ibhetri yangaphakathi
Isistim yaMandla Isithethi seKhaya 7
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukuphonononga uSomlomo weSistim saMandla 7